Homeसमाचारघट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा कारोबार हुँदैछ त?हेर्नुहोस्
December 9, 2020 admin समाचार 6077
सुनको मूल्य आज सात सय रुपै’याँ सस्तो भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्य’वसायी महासंघका अनुसार छापा’वाल सुन उक्त रुपैयाँ सस्तो भएसँगै आज प्र’तितोला ९३ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन ९४ हजार १ सय रुपैयाँमा का’रोबार भएको थियो।
त्यस्तै तेजाबी सुन पनि सोही अन्त:रमा घटेर आज प्रतितोला ९२ हजार ९ सय ५० रुपैयाँमा कारो’बार भएको छ। यो सुन अघिल्लो दिन ९३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँमा का’रोबार भएको थियो।
चाँदीको भने आज स्थिर भाउमा का’रोबार भएको छ। अघिल्लो दिन १२ सय १५ रुपैयाँ प्रतितोला का’रोबार भएको चाँदीको मूल्य आज घट’बढ नभएको महासंघले जना’एको छ।-खबरहब बाट
श्वेतालाई मुख हेरेर सासुले दिइन् बडेमानको सुनको हार, विबाहपछि श्वेताको घरमा देखियो यस्तो रमाइलो(भिडियो हेर्नुहोस्)
कृष्ण र रुपाको फेरीएको जीवन : सुनाए दु:ख पछि आ’एको सुखको क’हानी (भिडियो हे’र्नुहोस)
May 10, 2021 admin समाचार 3642
केही महिना अघि सम्म कृष्ण वली र रुपाको निकै मा’र्मीक भिडियो र कथा सामाजिक सजालमा सार्व’जनिक हुन्थे । उनीहरुको जोडीलाई सहयोग गर्न हजारौं नेपा’लीले सहयोग गरे । अहिले उनीहरुको जिवन फेरीएको छ । उनीहरु अहिले
April 10, 2021 admin समाचार 4087
May 22, 2021 admin समाचार 3578
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (222958)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (214969)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214644)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (212951)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211829)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (210788)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (209382)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209274)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (195021)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (177941)